Home Wararka M. Cagjar oo ku goodiyay in taageerayaasha TPLF hantidooda lala wareegayo
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafe Cagjar ayaa ka hadlay dagaalka waqooyiga Itoobiya iyo waxa u qorsheysan maamulkiisa haddii ay is badesho xaaladda.
Mustafe Cagjar oo wareysi gaar ah siiyay idaacadda VOA-da ayaa sheegay haddii xaaladda Itoobiya isbadesho in aysan amrnaba ogolaan doonin in talada deegaanka Soomaaliya ay gacanta u gasho TPLF iyo cid taageersan.
“Waxaa noo qorsheysan marna in aan masiirka Soomaalida cid kale gacanta u gelin ama TPLF ha noqoto ama kuwo dhabarka TPLF soo fuula oo dib halkan in ay mansab uga raadiyaan raba hanoqotee” ayuu yiri Mustafe Cagjar.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida waxa uu tilmaamay in ay hantidooda la wareegi doonaan dadka dibada ka taageera kooxda TPLF.
“Waxaa xaqiiqo ah in ay jiraan dad isku dayaya in ay khalkhal geliyaan amaanka deegaanka, kuwaasna waxaan kaga hortegi doonaa wixii xumaan ah oo ay ugu horreyso la wareegida hantida kuwa shirarka ku qabanaya dibada iyo kuwa lacagta u uruurinaya TPLF” ayuu hadalka ku daray Mustafe Cagjar.
Mustafe Cumar ayaa sheegay in dagaalka waqooyiga Itoobiya uusan ahayn sida warbaahintu u dhigayso oo hal dhinac ah, hase ahaatee ay jiraan deegaano badan oo ka tirsan gobolka Tigreega oo ay gacanta ku hayaan qowmiyada Amxaarada.